Codkaaga ku Ciil Bax qaybtii 7aad…Sanad ka Hor Bal Dib u Akhri Waxii Taagnaa….Ahmed Arwo | Toggaherer's Blog
« MAANSO CUSUB OO LA YIDHAA DANAYSTE
WAXAY NOLOSHU I BARTAY ?????? QAYBTII 3 AAD »
Codkaaga ku Ciil Bax qaybtii 7aad…Sanad ka Hor Bal Dib u Akhri Waxii Taagnaa….Ahmed Arwo
Waxaan maanta idinku casuumayaa dhacdooyinkii taagnaa sanad ka hor oo ah sawir asal u ah kuwa maanta taagan. Waxa arrinku joogay ismari-waa kolkaas ayaa ay is xilqaameen culumo Sheekh Dirir ka mid yahay, Abwaanada Hadrawi iyo Gaariye iyo Hormoodyada Jaamacadaha Hargeysa iyo Camuud, iyo Madaxa Acadamiyada Nabadda. Waxa la soo maray marxalado dhowr ah oo fadhi iyo caweysba leh, mid gooni gooni ah iyo mid wadareedba. Gunnaanadkii waxuu noqday in baaq af-garad ka soo baxo. Wey se socon weyday oo dib u gurasho aan milgo lahayn ayaa ka timid. Madaxa dalka, oo miciinsaday i-iinyo…i-iinyo, diiday haddana yeelay… ma jirto… wey jirtaa laakiin…. Waxay noqotay af-kala qaad ku habsaday qaranka Soomaliland. Waxay noqotay Madax aan wadan sifaha looga baahan yahay hoggaamin qaran, talo-goosasho leh, dulqaad iyo dareen raxmadeed u leh shacbiga, u gacan fudud danyarta iyo inta baahan, cudud u leh dambiilaha iyo daalinka, xaqqa u gurmada, aftahannimo leh uu dadka kaga dherkiyo fikirkiisa, lugo fudud oo u orda meel kasta oo masiib ka jirto. Ma lahayn, maantana maba jirto.
Anigoo Intaas ku daahfuray war-saxaafadeed uu bixiyey abwaanka weyne ee Maxamed Ibraahim Hadrawi taariikhdu markay ahayd 05/04/2008 aan idinku dhaafo ee hoos ka akhrista.
Bal Akhri Sida Hadrawi u Xusay Aqoon La’aanta Rayale ka Haysata Maamulka iyo Maaraynta Umadda
(Hargeisa) 05.04.08Guddoomiyihii ergadii dhex-dhexaadinta; Abwaan-Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi), ayaa soo saaray, war-bixin dheer oo qoraal ah oo xanbaarsan talooyin cul-culus oo si toos ah ugu socda Madax-weyne Riyaale, iyo weliba hoga-tusaalayn guud, oo ka dar-daar werinaysa xaaladdaha dhinacyada kala-duwan ee dalku maanta ku sugan yahay,
oo u baahan ka hor-tegid, wax ka-qabasho iyo toosin. Qoraalka Abwaan-Hadraawi soo saaray oo aad u dheeri waxa uu u dhignaa sidan soo socota:
Sida laga war qabo; waxa dhowaan magaalada Hargeysa laga aloosay, abaabul ku wajahan dhex-dhexaadinta dhinacyadii isku maan-dhaafay talada dalka. Gaar ahaan golayaasha, mucaaradka iyo muxaafidka ama axsaabta siyaasiga ah, iyo madaxtooyada. Waxa la isku deyey in dhinacyada is haya ee isu iman kari waayey, ama iyagu heshiin kari waayey la isu soo jiido, khilaafka iyo waxa ay isku hayaanna loo kuur galo ama lala ogaado, si yuhuun iyo niyadsami wada-shaqayni ka dhalato loo helo. Taas oo maslaxad u noqon lahayd dalka iyo dadka.
Dhex-dhexaadintaas; rag baa iyagu isu xil saaray, umadduna way ku garab taagneyd. Guddida dhex-dhexaadintu waxay ku dheeraatay dhabbo-dhabbayn, iyo inay dhinac walba kol ama laba ama saddex goor goonni ula kulanto, si ay u ogaato; dareenka dhinac walba ka jira iyo waxa dhinac waliba xal u arko. Dhinacyadii is hayey, waxay muujiyeen dareen xanbaarsan yididiilo. Waxay ballan qaadeen; in dhinac waliba fuliyo, waxa guddida dhex-dhexaadintu soo garato. Ka dib waxa suuro gashay in madaxtooyada, golaha wakiillada, golaha guurtida, labada xisbi-siyaasi (UCID iyo KULMIYE) la isa soo hor fadhiisiyo.
Hawshaas iyada ah, qaybtii macnaha weyn yeelan lahayd, laguma guulaysan. Aniga oo ka mid ahaa Guddida isu xil saartay waan-waan-raadinta, waan ka war qabey in meelo badan iyo siyaabo badan khalad u jiro. Laakiin waxaan muddadii dhex-dhexaadinta, ku baraarugey in khaladka ugu weyni ka jiro madax-tooyada. Madax-tooyaduna waxa ay ahayd in ay noqoto; waddo xaadhan oo loo sii maro sixidda khaladaadka jira.
Sida aan filayo khaladka madax tooyada ka jiraa, kulligii salka kuma hayo badheedh iyo qab qab dhaafay. Laakiin waxa ii baxday in; madax-tooyada aqoon-la’aani ka jirto, oo aanay kaba war qabin, hannaanka dawladnimo iyo macnaha ay xanbaarsan yihiin ereyada dawladnimo iyo madax-tooyo.
Waxa aan ogaadey in aragtida madax-tooyada ka jirtaa, aanay dhaafsiisnayn, tuducan gabayga ah, ee soo socda:
Garashadu hadday ruux la tahay,
suu u garanaayo
Garaadkiisu suu qabo haddii,
loola garan waayo
Gar-darruu u qaataa ninkii,
Labada magac, ee dawladnimo iyo madax-tooyo waxaa haboon in si xeel dheer loo faaqido, ka-dibna iyaga oo qoraal ah, lagu dhejiyo kursiga Madax-weynaha hortiisa. Balse iminka aan isku koobo dhawrkan qodob ee hoga tusaalaha ah:
Madax-tooyadu waa huga, hoyga iyo haybadda umadda.
Waxay astaan u tahay macnaha iyo milgaha dawladnimo.
Waa hal-bowlaha iyo xididdada dhiigga is dhaaf-dhaafiya ee marba dhan u tallowsha.
Madax-tooyadu waa barta laga ilaasho, lagana saxo khaladka soo dhex gala hay’adaha dawladda.
Waa majaraha iyo majiiraha geeddi-socodka qarannimo lagu jiheeyo.
Waa muraayad gudaha iyo debeddaba ku wajahan, oo ummad qaranimadeeda laga daawado. Wufuudda caalamka debedda ka timaadda, mar walba socodkoodu wuxuu ku salaysan yahay war-doon. Sida la-wada og-yahayna, war-raadintooda waxa ay ku horreeyaan madax-tooyada. Waxayna marka horeba indhaha ku dhuftaan Madax-weynaha iyo xafiiskiisa. Inta aan arrimaha rasmiga ah loo daaddegin, haasaawaha hor-dhaca ah ayey fekrad kaga qaataan Madax-weynaha. Marka rasmiga la gudo-galo, waxa ay u fiirsadaan abbaarta Madax-weynaha; (arrinta uu ka hadlayo iyo habka iyo hannaanka uu uga hadlayo). Haddii Madax-weynahaas kalsoonidu ka lunto, su’aalo iska soo hor jeeda ayey ku weeraraan, markaasey, marba si u hor cararaan. Haddii ay gawaan-raac, marin-habaabin ama buun-buunin ka dareemaan, waxaa u caado ah, in ay buruud-shiilaan, oo ay dhaliilihiisa duur-xul ugu sheegaan. Runta ay qiimayntooda ku salaynayaanna, waxa ay kala soo dhex baxaan beenta uu ku gabbado. Wufuuddaasi; hadba waxa ay madax-tooyada kala kulmaan, ayaa dadka iyo dalka faa’iido ama khasaare u ah. Ninka madaxda ah Hadalkiisu waa in aanu ku milmin hasaasaha iyo haloosiga suuqa dhex qaadaya. Marin-habaabinta, buun-buuninta iyo beenta madax-tooyo sheegto ayey kala soo dhex baxaan runta iyo xaqiiqda dalkaas ka jirta.
Sida lagu yaqaanno madax-tinnimadu, waxay leedahay milge, asluub iyo astaan ilaalisa haybadda kursiga iyo xilkaas ma-dhaafaanka ah.
Waxaa madaxtinnimada lagu yaqaane; is-dhawrid iyo af-gobaadsi, iyo had iyo jeer abbaar sugan oo qor-qoran.
Erey kasta oo ninka umadda u caleema-saarani yidhaahdaa waa rasmi; kefed iyo miisaan buu saaran yahay; wixii qadaf aa ama meel-ka-dhac ah lagama aqbalo.
Ninka madaxda ah, hadalkiisu waa in aanu ku milmin hasaasaha iyo haloosiga suuqa dhex qaadaya.
Madax-tinnimadu inta badan kama jawaabto wax kasta oo iyada wax ka sheegaya, haddii ay ka jawaabtona waxay kaga jawaabtaa hab iyo hannaan aan madax bannaanayn iyo weliba hubsiino si deggan loo yidhaahdo.
Madax-tinnimadu ma beeniso mana dadafeyso, oo muran ma geliso wixii gar ku ah. Haddii sidaas lagu bartona waa dhaliil weyn oo lafo-jab ah, dhinaca kalena garashadu waxa ay ina bartay; in aan run mutuxan (run caddaan ah) xadhko caabbiyaa jirin.
Madax-tinnimada erey kasta oo lagu yidhaahdaa kama hadliyo, oo dareenkeeda ma shido.
Jawaabta Madax-weyne bixiyaa ma habboona in ay mar walba noqoto maya iyo ma jirto.
Madax-tooyada iyo kursiga ma-dhaafaanka ah; nuxurka iyo dhadhankaa ka luma haddii ay wax walba ka jawaabto, ama arrimaha si fudayd ku jiro u gasho.
Mar walba qofka Madax-tooyada wax ka sheegaa ma khaldana, canbaarayn iyo caar-duminna uma jeedo, dhaliilaha runta ahna laguma hor joogsan karo erayo af-dhabaan-dhab ah iyo weliba dardaar-werin aan cidna lagu didin karayn.
Madax-tooyadu iska-mooska dhaliilaha loo soo jeediyo, waxay u yeelataa Wasiiro, Ku-xigeenno, Af-hayeenno iyo cid Madax-weynaha uga faro dhuudhuuban oo arrimahaas ka hadasha.
Ma aha, in marin laga dhigto, in qof kasta oo hadlah Madax-tooyadu boodhka ku liqdo, si ay iyadu gar iyo gar-darroba ugu guulaysato.
Macne kuma jiro, in Madax-weynuhu noqdo keeb-la-yuurur runta ka indha qarsada.
Qarannimadu halis bay ku jirtaa, haddii ninka u bokhrani caado ka dhigto, anafo iyo aar-goosi, ama cudurka uu yeesho ee qaado lagu yidhaahdo, uu kal didsan ku qaato, oo uu arrin kasta laalo, si mar walba, loo sii kala-fogaado.
Sidaan marar badan u idhi; Madaxtinimadu:
– Toog-hayn iyo feejignaan bay leedahay,
– Oddoros iyo awaal-deyis bay leedahay,
– Samir iyo dul-qaad bay leedahay,
– Ta-saamux iyo tanaasul bay leedahay,
– Isla dey-deyid iyo maxay dantu ku jirtaa bay leedahay,
– Sidee bay nolol iyo nabad-gelyo ku jiri kartaa bay leedahay,
– In lafaha la-guro, xarragona aan laga tegin bay leedahay,
– Dugsi iyo daar gobanimo, ayey leedahay,
– Xushmo iyo is xaq-dhawr bay leedahay,
– Xirib iyo xeer-ilaalin bay leedahay,
– Caddaalad iyo gar-soor la-dugsaday leedahay,
– Eray la-dhaafiyo dibu-dhigashay leedahay,
– Dugaal iyo damal la-hadhsaday leedahay,
– Digtoonaan iyo daymo fog bay leedahay,
– Intaas iyo in ka badan bay leedahay.
Hadal sal buu leeyahay, biyo-gororka sheekada iyo ujeeddada aan maqaalkan uga gol leeyahay, waa in madax-tooyada digtooni iyo aqoon siyaasi ahi ka jirto, oo aanay indhaha shacabka iyo indhaha Caalamka maro xuub caaro ah (khafiif ah) ka hagoogan. Waxaan Madax-weynaha mar kale ka codsanayaa; in ragga miisaanka leh ee Qaran si niyad-samiyi ku jirto uu u sii daayo. Waxaan ogahay in Madax-weynuhu sidaa yeeli karo, isagoo aan geed ku xoqasho iyo cudur-daarro keenin, mar haddii hannaanka dalku ku socdaa yahay; qarba-boosh, xeer-jajab, gole-ka-fuul, la-jiifiyaa iyo la-joojiyaana bannaan. Waxaan mar kale Madax-weynaha u soo jeedinayaa; in raggaas si xushmad leh loo sii daayo, oo aan xorriyaddooda lagu sii dhegin, xaquuqda siyaasiga ahna aan waxba lagu gudbin.
Madax-weyne, waxaan kugu baraarujinayaa; qodobbadan hoga-tusaalaha ah, in aad dhinaca wanaagsan iska taagto si aad u ogaato inaan adiga kula jiro oo aanan kaa soo hor jeedin. Madax-weyne aniga ha ii jawaabin ee qaranimada kuu yeedhaysa u jawaab. Qof kasta oo dareeen waddani ah leh waxaa kashiisa lulaya wer-wer ku saabsan xaaladda dalka iyo dadku ku sugan yihiin, haddii culayskaas dadka saarani sii foon-dhaafo waxaa la-filaaba waa in xaajaba faraha ka baxdo, waana masuuliyad aan berrito laga baxsanayn, ama aan si fudud la isaga leexin karayn. Nin kasta oo masuul ahi waxa uu isu min-guuriyey iyo malihiisu waa been; haddii masuuliyadda uu hayaa ay lunto. Masuuliyadda ugu weyn ee dalka iyo dadku waxay saaran tahay Madax-weynaha iyo golihiisa wasiirrada, xaajo cad iyo xisaabtanna way danbeeyaan haddii la-noolaado.
Dhiillada aan guud ahaan umadda ku baraarujinayaa waxa weeye; sida ay u sii gurmayso iyo sida ay u baraad-la’dahay oo kaaf iyo kala-dheeri ah. Arrintuna halka ay ka fadhidaa waa kaalinta hoggaaminta iyo shacabka oo aan meelnaba ka soo gelin talada dalka.
Halkuu daacad kaga hadho,
Dabar lagu ceshaa jira,
Dacwad baa ka furan kale.
Doqonniimo ugu filan.
Cirka sare nin degeshadey
Dayixiyo marmari jirey
Xiddigaha la deriska ah,
Dhulku wuu dirsoocaa!!
Ugu-danbayn, maansadan waafaqsan dulucda ujeedada iyo xaaladda jirta, waxa ay ka hadlaysaa; xeerka nolosha iyo waajib-gudashada Bani’aadamka korkiisa la-saaray iyo haddii waajibkaa la-gudan waayo guul-darrada imanaysa. Maansadan magaceeda waxa la-yidhaahdaa SUUBBAN, waxayna tidhi:
Socotada u meel-tiil,
Duni iyo su’aasheed,
Samo xumo hor joogiyo
Kala seeran weeyaan.
Duni lagula saayirin,
Runta laga sal-gaadhayn.
Nin ku seexday waa yaab.
Kala-soof in gudashada
Qofba dhinac ku sara-kaco
Samo samo la-dhaafshiyo
Isa-sudhan ha noqotaa
Sababuhu u dhacayaan.
Sife lagu dar-yeeliyo
Sacab lagu hor joogiyo
Hiyi lagu sarbeebaa.
Marka loo sid-tiriyoo,
Ku sar-go’an runtiisee
Waxan suura-geli karin
Marba xadhig la-soohiyo
Saxarkay ka gubataa,
Marka suun in lagu xidho
Sooryadeedu waa taas.
Sumbo aan dab lagu shidan
Ha ku socoto maahoo
Saymaheeda meel yaal
Innagaa ku soconnoo
Qof san-saanka muuqdiyo
Hadba taan la sidan karin
Sahal lagama yeeshee
Ku salliya Rasuulkii.
Saqda dhexe fal-gunuddadu
Talo kuuma sarinsana.
Sababaha lurkaaga ah
God sagaal-jir lagu dedo
Sidaad doonto yeelkaa.
Sumuc loogu mala-deyey
Ninka lihi ka saahidey,
Nin siraata yeelkii!!.
Abwaan-Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi).
Waxa kuu muuqnaysa horumar la,aanta sanadkaas taagnayd. Waxa aad arkaysaa Madaxtooyada oo tilmaantii Hadraawi sawir dhab ah ka bixisay. Madaxweynahu intuu noqon lahaa ninka ugu dareenka fudud oo horkici lahaa cid kasta oo xal-raadis ah, uu noqon lahaa aabbe u nahay dadkiisa, ruux uu kiciyo damiirka xilku, waxa uu socdaalo u dhow dalxiis bishii hore ugu dhaqaaqay debedda kolkii uu soo noqdayna kama hawl gelin dhibta taagan. Xataa hadal uu ummadda u soo jeediyey ma jirto. Cid og waxa dhabta ah ee uu aaminsan yahay ma jirto. Waxa hadlaaya Wasiiro iyo wakiilo ayna talo ka go’in, kalsooni yar isku qaba oon qaraar gaadhi karin.
Waxa la yaab ah dalka yaa xukuma? Maxaa u diiday in Riyaale fikirkiisa dadweynaha la wadaago? Maxaa gabashada iyo qol-isku-xidhka ugu wacan? Madaxnimadu miyeyna ahayn in cidda Alle siiyaa yeelato ku-dhac fikirkiisa iyo waxuu aaminsan yahay ku hawl gala oo badhadhiisa si cad loo fahmo. Miyeyna ahayn inuu noqdo hoggaan cid walba uga naxriis badan shacbiga? Ruux daafac sharciga iyo dastuurka?
Arrinta maanta dalka taalaa xataa ka camal xun kelitalisnimo kolka dhinac laga eego. Waayo kelitalisku wuu cadeeyaa waxa uu qabo, amarkiisu afkiisuu ka soo baxaa. Waxuu isku dayaa inuu dadweynaha ku qanciyo fikir qaldan, laakiin wuu aaminsan yahay in dadweynahu awood leeyahay sidaas darteed faqa iyo qudbaddu ma kala go’do. Halkeena waa shib iyo dibno xidhin, waa madax malaasan oon cidna talo la wadaagin, arrin ka go’in, ku-tala-gal lahayn, meel loogu tooso la garnayn. Taas ayaa ka dhigtay xalka hawsha taagan mid aan maareen lahayn.
Talo xumada ugu weyni waxay ka iman kartaa ciidanka iyo boliska oo garanwaaya cidda ay xilka u hayaan, oo noqda dar halkay sharciga iyo dastuurka daafici lahaayeen, qof qaldan isku gaadaama. Talo-xumadaasi waxii laga dhaxlay waa taynu aragnay, ee ha laga fayjignaado. Nin waliba ha garto sharciga uu u dhartay daafaciisa, iyo inaanu u dhaaran inuu qof daafaco. Waa waajib qaran iyo la-xisaabtan if iyo aakhiraba ah.
Maanta waxa xil saaran yahay madaxda kale ee UDUB. Ma la heliyaa cid isu taagta sharciga iyo badbaadada qaranka, ma la heliyaa cid awrka dabarka goostay joogso tidhahda. Haa oo waatan maantaba Cabdiqaadir Jirde hadlay, waatii shalay Direwel, Sandoon, Ismaaciil Aadan, Adan Ruush, Jawhari iyo rag kaleba ay afka gacanta saareen. Waxa taas oo kale looga fadhiyaa inta weli daladda dulmiga dugsanaysa. Dalka qofna qof kama xigo, xisbigana qof ma leh. Waa danwadaag iyo talo wadaag, sharci hoggaamiyo.Ha loo gurmado danta guud, oo Mucaaridku in badan ayuu ku celceliyey wadatashi iyo talo-wadaag ee ha laga helo dar xilku damqo dhinaca kale.
Waa la helayaa ee aan guubaabino, hana maqlaan tiirarkii UDUB ee daafaha dunida ka dhawaaqaaaya… Dr. Ubaxle iyo garabka Dimuquraadiga ah, ha la xidhiidhaan inta gabashada ku jirta. Aynu u kacno badbadaada dalkeena, inagoo hadafkeenu yahay in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah. Aan dariiqqa u xaadhno in la helo maalin ruux waliba helo fursad uu CODKIISA KU CIIL BAXO….taas ayaa inoo ah daawo qaran.
This entry was posted on April 6, 2009 at 3:53 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.